လပြိုများနှင့် တွေ့ ဆုံခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » လပြိုများနှင့် တွေ့ ဆုံခြင်း
လပြိုများနှင့် တွေ့ ဆုံခြင်း
Posted by ဂျစ်စူ on Jun 3, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing | 34 comments
တံခွန်မရှိတဲ့ဘုရား၊ အလံမရှိတဲ့ရထား၊ မယားမရှိတဲ့ ယောက်ျား ဘယ်လိုမှ မတင့်တယ်နိုင်တဲ့ခင်ဗျား..။
ဒါကြောင့် ကျနုပ်အူးဗီုက်ကလေးမှ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်မှ တတ်နိုင်သော အကန့် လေးကို တင့်တယ်ပြီး
အိုကေ စိုပြည်စေရန်အလို့ ငှာ ခမ်မဏီ တစ်ခုထောင်ရန် အကြံထုတ်မိလေသတတ်။
ယင်း ခမ္မဏီ မှာကား ဂေါ်မစွံ လပြိုကြီးများကို လပြိုဂျီးဘ၀မှ ကင်းလွတ်ကျွတ်မြောက်အောင် မိန်းမရှာ ပေးစားခြင်း ဟူသော ၀န်ဆောင်မှုပေးသည့် ခမ္မဏီပင် ဖြစ်ချေ၏။
အူးဗိုက်၏ မိန်းမရှာ အကျိုးဆောင် ပေးမည့် ခမ္မဏီမှ ဂေါ်မစွံ လပြိုဂျီးများကို လျှောက်လွှာခေါ်ယူ၍ လူတွေ့ အင်တာဗျူးပေးပြီးသကာလ လပြိုသိုး ဂျာနယ်၊
လပြိုသိုး ၀ဘ်ဆိုဒ်၊ လပြိုသိုး ပြခန်း စသဖြင့် ကြေငြာမောင်းခတ်မှု အမျိုးမျိုးဖြင့် ဂေါ်မစွံ လပြိုကြီး/လေး များအား ပွဲထုတ် ကြော်ငြာပေး ၍ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ
အပျိုကြီးများ စိတ်ဝင်စားလျင် အနှီဂေါ်မစွံများဖြင့် အလွယ်တကူ အောင်သွယ်၊ ထိမ်းမြား ပေးမည်ဟူ၏။
အူးဗိုက်၏ မဟာဥာဏ်စူးရောက်ခြင်းအား လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်သော ဂေါ်မစွံ ခမ္မဏီ စတင်
တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်သော နေ့ ၌ပင် ဂေါ်မစွံ လပြိုသိုးပေါင်းများစွာမှ လျှောက်လွှာတင် ၊ လူတွေ့ စစ်ဆေးမှုများဖြင့်လျင် ခမ္မဏီမှာကား ခန်းလုံးပြည့် စည်ကားပြည့်နှက်နေသည် ဟူ၏။
ထို့ အထဲကမှ လာရောက် အဗျူးခံကြကုန်သော လပြိုများနှင့် တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခန်းကို အစဉ်လိုက် ဖော်ပြပေးရန် အူးဗိုက်မှ စိတ်ကူးရှိမိလေ၏။ဗျူးခြင်းများဖြင့်
အချိန်မရသောကြောင့် အစောဆုံး လာရောက် အဗျူးခံသော လပြိုနှစ်ဦးသာ စာမြည်းအနေနှင့် ဖော်ပြပေးပါမည်။
ကျန်ရှိနေလေသော လပြိုများနှင့် ဗျူးခန်းကို ခမ္မဏီပိုင်ရှင် အူးဗိုက် အမူးပြေသောနေ့ ၌ ထပ်တင်ပေးရန် စိတ်ကူးထားပါသည်ခင်ဗျား။
စာရှုသူများ စိတ်ဝင်စားမည်ဆိုပါက အောက်တွင် ရှုပါလေ..။
ဗိုက်။ ။အူးလေး နာမည်လေးတစ်ချက်လောက်..
ဖြေ။ ။တွေ့ မရှောင် ပြူးကြောင်
ဖြေ။ ။ဟုတ်တယ်..ဖလန်းဖလန်းလေးဒွေကို တွေ့ တာနဲ့ မရှောင်ပဲ ပြူးပြဲထွက်အောင် ငန်းလွန်းလို့ငါ့ကို ဒီနာမည်ပေးထားကြတာ..
ဗိုက်။ ။အော်..၀ုတ်ခဲ့..အသက်က ဘယ်လောက်ရှိပလဲ ခင်ဗျ
ဗိုက်။ ။အရွယ်ကောင်းပဲဗျာ….ဒီအရွယ်ရောက်တာတောင် ဘာပြုလို့မိန်းမ မယူသေးတာလဲဗျ
ဖြေ။ ။မရလို့ ၊ ပြီးတော့ ငါချိန်လိုက်တာနဲ့သူများနောက်ပါပါ သွားတယ်ကွာ..ဟူး….
ဗိုက်။ ။သြော်..သြော်..ဒီလောက်ငန်းတာတောင် တစ်ယောက်မှ မရခဲ့ဘူးလားဗျာ..ကျနုပ် ဗျူဟာအတွက် ရင်လေးလိုက်ပါဘိ..ဒါနဲ့ .အူလေးက ဘာအလုပ်အကိုင်များ လုပ်ပါသလဲခင်ဗျာ..
ဖြေ။ ။ဘားမှ မလုပ်ဘူး.၊ အမေ့ဆီက လက်ဘက်ရည်ဘိုးတောင်းတယ်..၊ ယောက္ဖ သုံးကောင်နာမည်နဲ့ 
ဘီအီး အကြွေးလိုက်သောက်ဒယ်..၊ မနက်ကော်ဖီ ည စကီပေါ့ကွာ..အဟက်ဟက်ဟက်..၊ အလုပ်ဒွေ အများကြီးလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်..
လက်ကြောမတင်းလို့ဘာမှ ဆက်မလုပ်တော့ပဲ ခုလို လယ်ရာ ပြန်စားရေး လုပ်နေဒါ
ဗိုက်။ ။ကောင်းပါလေ့ဗျား…မိန်းမကော ယူဖို့ အစီအစဉ်ရှိသေးလား ခင်ဗျ..အလုပ်မရှိပဲနဲ့ တော့ ဘယ်မိန်းမမှ ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်….
ဖြေ။ ။ဟား..မိန်းမကတော့ အခုရ အခုကို ယူပစ်မှာ၊ အလုပ်ကဒေါ့ ရွေးနေတုန်း၊ သက်တောင့်သက်သာနဲ့အာတကီးများများရရင်တော့ စမ်းလုပ်ကြည့်ဖို့ စဉ်းစားထားပါဒယ်ကွာ..
ဗိုက်။ ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျား..အူးလေး တွေ့ မရှောင် ပြူးကြောင်ကို ဆက်သွယ်ရမဲ့ လိပ်စာလေး..တစ်ဆိတ်လောက်..
ဖြေ။ ။မနက်ပိုင်းဆို ဦးဝါကြီး လ္ဘက်ရည်ဆိုင်၊ ညနေပိုင်းဆို ကိုတုတ်ကြီး ဘိလိယက်ခုံ၊ ညဘက်ဆို မောင်သံချောင်း ဘီအီးဆိုင် မှာ ပုံမှန်ရှိ။
ဗိုက်။ ။ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျား..ခုလို မအားတဲ့ကြားက အချိန်ယူ ဖြေကြားပေးတာ အထူးတလည် ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် ခင်ဗျား..
ဖြေ။ ။အေး..နင်ကြော်ငြာပေးတာ မပေါက်လို့ ငါ မစွံခဲ့ရင်တော့ ကေတီဗွီ နှစ်ဆက်ရှင်စာ ဒဂါခံပေးဖို့ သာပြင်ထားပေဒေါ့…
ဗိုက်။ ။ အူးလေး..နာမည်လေး.တစ်ဆိတ်လောက်…
ဖြေ။ ။ မင်းခန့် ထွဋ်ခေါင် မောင်ဖိုးထောင်
ဗိုက်။ ။ ဟိုက်စ်..နာမည်နဲ့ လူနဲ့တခြားစီပါလားဗျာ..မဲမဲပုပု၊ ခန့် ညားထောင်မောင်းခြင်းလဲမရှိ..အဲလေ.ယောင်လို့….အသက်လေး ပြောပေးပါဦး..ဟီး.ဟီး..
ဖြေ။ ။ အတက်က နှစ်ချယ့်ငါးနှစ်ပါ
ဗိုက်။ ။ မထင်ရဘူးနော်..အတော်နုတာပဲ .ကျနော်က လေးဆယ်ကျော်လောက်ရှိပြီထင်လို့ဦးလေးလို့ ခေါ်လိုက်မိတာခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျား….ဒါနဲ့အလုပ်အကိုင်လေး ပြောပေးပါနော..
ဖြေ။ ။ အလုပ်ကတော့ မလုပ်ရသေးပါဘူး..မားသားကြီးဆီက ဟိုသင်တန်းတက်မယ်.ဒီသင်တန်းတက်မယ်ဆိုပြီး တစ်ကယ်မတက်ပဲ မန်းနီးတွေ ဘုန်းပြီး ချက်တင်ထိုင် ၊ ဂိမ်းအကြွေးဆော့နဲ့အေးဆေးပဲဗျ ။ တစ်နေ့ တော့ မော်ဒယ်လ်ဘွိုင်းလုပ်မယ် စိတ်ကူးထားပါတယ်…
ဗိုက်။ ။ သြော်..သြော်..ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည့်မှု အတော်ရှိတာတွေ့ ရလို့ ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျား..ဒါနဲ့ 
ထားခဲ့ဖူးတဲ့ ရည်းစားအရေအတွက်နဲ့ဘယ်တစ်ယောက်ကို ဘယ်တော့ အတည်ယူဖြစ်မလဲဆိုတာလေး ပြောပေးပါဦး..
ဖြေ။ ။ အိုးမိုင်ဂေ့ါဒ်..ဘယ်သူမှ မကြိုက်လို့ ..ထားစရာရည်းစားမရှိ၊ လိုင်စင်မရှိလို့ခင်ဗျားဆီကို လာအဗျူးခံတာလေဗျား..
ဗိုက်။ ။ ဟုတ်ပြီဗျား..အခုလို ရှင်းရှင်းလေး ပြောပြပေးတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့နော..ကို မင်းခန့် ထွဋ်ခေါင် မောင်ဖိုးထောင်ကို ဆက်သွယ်ရမဲ့ လိပ်စာလေး..တစ်ချက်လောက်ပြောပေးပါဦး..
ဖြေ။ ။ ပုံမှန်လေး ဂျီတော့ခ်၊ ဖေ့စဘုတ် တက်ပြီး ကြူပါတယ်။ လမ်းဆုံက အူးပေတို့ ဂိမ်းဆိုင်မှာ အမြဲ ဂိမ်းကပ်ဆော့တတ်ပါတယ်..၊ တစ်ခါတလေ ဒစ္စကောင့်ချတဲ့ သတင်းကြားရင်တော့ ရှော့ပင် ထွက်ကြည့်ပါတယ်..ကြည့်ပဲကြည့်ပါတယ်..၀ယ်တာ ရှားပါဒယ်..။
ဗိုက်။ ။ ကောင်းပါပြီဗျား..ခုလို ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် အထူးတလည် ကျေးဇင်းတင်မိပါတယ်နော..။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့..ဟုတ်ကဲ့..ကျွန်တော်လဲ အောင်သွယ်တော် အူးချိုနဲ့ဒိတ်ထားသေးလို့ပြေးလိုက်ဦးမယ်ဗျို့ ..၀ှစ်စ်..၀ှစ်..၀ှစ်စ်..။
ကျန်ရှိလေသော အင်တာဗျူးများကို အမူးပြေလျင် ထပ်တင်ပေးမယ် စိတ်ကူးမိပါတယ်..။
ရွာထဲမှ လာရောက် အဗျူးခံလိုသူ လပြိုများကို အထူးစပယ်ရှယ် ဒစ္စကောင့်ပေးခြင်းဖြင့် ထိပ်ဆုံးထား၍ ကြော်ငြာ မောင်းခတ် ပွဲထုတ်ပေးပါမည်။
မန်းနေးကျင်းဒါလိုက်ဒါ ပလိုဗိုက်တာ ဖောင်ဒါ အူးဗိုက်
အဟီ ခပ်ချောချောလေးများတွေ့ရင် အကြောင်းကြားနော်
ထိပ်ဆုံးက လပြိုသိုးလေးပါလား ဟရို့ ..
အခြောက်တွေ ဝိုင်းဖက် ဝိုင်းနမ်း တာနဲ့ မန်းလေးတောင် ပြန်ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူး
ချိန်လိုက်တိုင်း သူများနောက်ပါသွားသူများကို ချိန်ပါဟုခေါ်၏
အူးဗိုက်ကြီး စာဖတ်ရင်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဘဲ ဒီနေ့ ဝက်ဆိုက်တစ်ခု ကို ရှာဖွေတွေ့ ရှိခဲ့တယ် ။ လူပြိုကြီးတွေ အတွက်ပေါ့ ။ဘလက် အန် ဝှိုက် တဲ့ ။ အန် က အေအန်ဒီ မဟုတ်ဘူး ။ တစ်ခုံးအန် ။ ပလော်စီတော့ ကျော်ရတာကလား ။ တစ်ခုရှိတယ်နော… အိတ်ထိယ များ မကြည့်ဖို့ လိုပါတယ် ။ ဟီဟိ
ဒိုမိန်းနိမ်းကို ပေးစရာရှားလို့နာဒို့ ကျောင်းဒဂါရဲ့ နာမည်တ၀က်ကို ယူသုံးထားလေရဲ့
ကျနော့လို လူပြိုတပတ်နွမ်း ကိုရော..
သုံးခုလပ် သတို့ သမီးလောင်း ရှာတွေ့ ထားပါဘီ..
အောက်က ကိုကိုကမ်းအတွက် ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့စမ်းသပ်နိုင်မဲ့ အပျိုစစ်စစ်တွေ့ ထားပြီးပါပကောဗျာ
ဒါဘေမဲ့..မနက်တိုင်းမနက်တိုင်းတော့ လူကြားမကောင်းအောင် အော်ဆဲတတ်တယ်ဗျာ..အဲတာလေး တစ်ခုပါပဲ
ကိုယ်ချိန်ရွယ်ထားသော မိန်းကလေးတူများနောက်ပါသွားသူကို ချိန်ပါ..
ကိုယ်ရာထားသော မိန်းမကလေးတူများမသွားသူကို ရာမ…
အူးလေးကျောင်းဆရာ ကိုကိုဂျက် ခင်ဗျ
အူးလေးက ဂျက်လီလိုလို ဂျက်ကီချမ်းလိုလို နေထပ်ပူပြင်းလိုလိုနဲ့ မိုလို့အူးလေးနဲ့ သင့်တော်မဲ့
မဲဟေခို ဆိုတဲ့ စကီလေးတွေ့ ထားပြီးပါပြီ.ဒိတ်ပေးပါ့မယ်..
အောက်က တိုရင် စိသူ ခင်ဗျ
အူးလေးလို ဂျပန်အင်ဂျင်တပ် လပြိုဂျီးအတွက် ဟောင်ခေါင်မှ အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းလာတဲ့
သဒို့ သမီးလောင်း မယ်ဖင်ဟောင်းလောင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်.အဆင်မပြေရင် ချွတ်စွတ်တူတာတစ်ခု အစားထိုးပေးပါ့မယ်..
ပစ္စည်းမမှန်ပါက ရေစက်ချ အမျှဝေလိုက်ယုံပါဘဲခင်ည
အူးဗိုက် တားလည်း ခုမှ ဂျီပွန်က သွင်းလာတဲ့
အင်ဂျစ် အသစ်စက်စက် လူပျိုလေးပါ.. အူးအူး…
ဒါတောင် မကျေနပ်သေးရင် တက်မွန်မြင့်ကို မေးမရား
ဒါတောင် စိတ်မသင့်သေးရင် ၀တ်မှုန်ချွေရည်ကို စစ်မလား..
လပြိုဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာမဟုတ်လား မန်နေကျင်းကြီး .. အူးဘိုက် မန်နေကျင်းမလုပ်ပါနဲ့းးး တူများတွေလို စီအီးအိုက မလျှော့နဲ့ ….
အဆင်မပြေတဲ့ တစ်နေ့ အဆင့်သင့်ဖြစ်ရအောင် ကြိုတင်စာရင်းသွားထားပါရစေနော် …. နော်.. စီအီးအိုကြီး
အူးလေးရဲ့ အမျှော်အမြင် ကြီးမှုကို လေးစားသောအားဖြင့် အဆင်မပြေတာနဲ့ချက်ချင်း ချိန်းနိုင်အောင်
သများ.. ဘိန်းတော့ မရှုပါရစေနဲ့ ချင့်
ဆေးခြောက်တော့ မဆိုးဘူးလားလို့အဟင်းဟင်း..ဟင်း..
အီးပန်းဆိုလို့ မနက်က အစုံသုပ် ချဉ်ငံစပ် တီးထားတာ ဗိုက်က ရစ်နေဘီ..
အူးဗိုက်..အူးဗိုက်ခမ္မဏီ ရဲ့ တင်ပြမှုအရ…မိန်းမယူချင်ရင်…အလုပ်အကိုင် ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို….ခံယူထားတဲ့ပုံ ရှိပါတယ်။
အဲဓီ ခံယူမှုဟာ ဘိုးတော်အဉ္ဇန မင်းလက်ထက်က အယူအဆပါ။ ဓီနေ့ခေတ်က မိန်းမ ယူတဲ့ ခေတ်မဟုတ်ဒေါ့ပါဘူး… .ယောကျာ်းယူတဲ့ခေတ်ဖြစ်နေပါပြီ။
မိန်းမယူဒယ်… .မိန်းမယူဒယ်…လို့ ပြောပြောနေကြတာလဲ..လိန်ခွဲခြား ဆက်ဆံမှု တစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် ယင်းအဆိုကို ပယ်ဖျက်ပေးပါ။ ယောကျာ်းယူ တယ်ဆိုတာလဲ လုပ်သင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ မိန်းမယူချင်လို့ အူးဗိုက်ကမ္မဏီမှာ အလုပ်မအပ်လိုပါ။ ယောကျာ်းလိုချင်သူ အပျိုပေါက်စလေးများကို အင်တာဗျူးပြီး အဆင်ပြေလျှင် ကျွန်တော်အယူခံနိုင်ပါတယ်။
အူလေးရဲ့ လိပ်စာအရ အီသီယိုးပီးသီးယားက တစ်ယောက်တော့ လက်ခံသဘောကျမှာကျိန်းသေတယ်..
ရေလည်ပျောက်တယ်နော..ကြေငြာရင် ဆိုဒ်ပါ ထည့်ဖော်ပြ ကြော်ငြာပေးမှာပါခင်ဗျ
မန်းနေးကျင်းဒါလိုက်ဒါ ပလိုဗိုက်တာ ဖောင်ဒါ အူးဗိုက် ခင်ဗျာ
လူကြီးမင်းရဲ့ ခမ်မဏီအတွက် အရေးကြီးတာလေး အကြံပေးပါရစေ။
လပြိုကြီးများရဲ့ အဓိကကျတဲ့ size များကို ထည့်သွင်းကြော်ငြာပေးဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။
(ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်၊ အရပ်အမောင်းကို ဆိုလိုတာပါ။)
အူးကြောင်ဂျီး နဖူးရေဒူးရေနဲ့ဆို ကြွက်ကြီးကြီးတော့ ရမှာ ကျိန်းသေပါတယ်ခင်ည..စိတ်ချယုံကြည်စွာ ပူးပေါင်းပါလေး..
နေရပ်လိပ်စာက ကြက်ခြံလို့ ဖော်ပြပေးရမှာလားခင်ဗျ
ဘဲဥကိုလည်း စာရင်းတို့ထားလိုက်နော် အူးဘိုက်
အူးဗိုက် မူးမိုက် ကာ
အူးလေးလို ခလေးငါးယောက်နဲ့လပြိုဂျီးအတွက် ခလေးငါးယောက်ပါတဲ့အာပြိုကြီးကို တွေ့ ရှိပြီးပါပြီ
စိတ်ဝင်စားပါက ဆက်သွယ်ပါနော. hehe
မခိုင်ရေ..ဓာတ်တိုင်ကို သွားမပြောပါနဲ့ နော.
အမလေး ဒီပို့စ်ကိုဝင်ဖတ်တာ အနံကိုနံထောင်နေတာပဲ အန်တောင်အန်ချင်တယ် လူပျိုသိုးတွေတင်မကဘူး လူပျိုဟန်ဆောင်နေတဲ့ အအိုတွေပါပါသေးတယ် ……… တော်ပါပီအေ တစ်ခြားလူတွေကိုလက်တို့ထားမှ ဒီထက်ကဟာတွေက ဆိုဒ်လွန်တွေလို့ …….. အူးအူးဗိုက်ကုမ္ပဏီက လူတွေကိုပယ်ပါတယ်ဗျို့ ….. ထိပ်ဆုံးက တစ်ယောက်ကတော့မဆိုးဘူး ဒါပေသည့်ယူပြီးမှခြောက်သွားရင် ဒွတ်ခ ……
ငါ့ရှေ့မှာ ဦးထားတဲ့လူဒွေတောင် များပေါ့ …
ဒါပေမယ့် ကိတ်စ ရှိပါဘူး ..
အုဗိုက်နဲ့ ငါနဲ့က သိဒယ် …
အုလေးဂျီး အုဗိုက်ခီများ ..
တားတား နံမယ်က ရွှေကံကောင်း မောင်မောင်ကောင်း
တားတား အသက်က နှီဆယ့်နား ..
အလုပ်အကိုင်ဂ ထွေရာလေးပါး ..
ဂလောက်လို ရပလားဟင် …
တားတားကို ခပ်ချောချောလေးနဲ့ ချိတ်ပေးဘာနော် ..
ဘီအီး နှစ်ခါ အဝတိုက်မယ် .. အဟီးးးးး
အနော်ဟာ လူပြိုလေးပါ ခင်ည
အဟိ ကြော်ငြာ ဝင်လိုက်မိပါသည် ။
ဒီက လူဂျီးနဲ့ ..
ဟိုက လူဂျီးက အမျိုးလားဟင် ..
ဒီက ကြီးပြီး .. ဟိုက သေးတာလားဟင် …
ဗိုက်ကြီး နဲ့ ဗိုက်ကလေး … ဆိုလို့ …
အဟိ အကျွနုပ်ဗိုက်သည်ကား ပိစိညပ်လေးကြီးနေပါသရွေ့ ဗိုက်ကြီးဟုခေါ်ဆိုရခြင်းပါ
ဗိုက်ကြီးလာရွေ့ ဥဂျီး ဗိုက်ကလေး ပြေးခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည် ။
ဗိုက်ကြီး ဆိုပါလား … ဧကန်န အမွှာပူးများလား ဘဘတို့ရယ်…
သိဘူးသိဘူး..ဗိုက်ကြီးရင် ဘယ်သူမှ ဆက်သွယ်မှာ မဟုတ်ဘူး
ခမ္မဏီ နာမည်ပျက်အောင်လုပ်နဲ့ ..